Inona no ho hitanao any Copenhagen | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Copenhagen
Mariela Carril | | Copenhague, Inona no ho hita
Ankehitriny dia manana lamaody ireo firenena any avaratr'i Eropa. Sinema, andian-tsarimihetsika, gastrolojia ... ny zava-drehetra dia mitarika antsika te-hahafantatra ireo firenena milamina ireo, miaraka amin'ny rafi-pampianarana tsara, fanjakana ankehitriny ary toekarena marin-toerana. Ohatra, Danemark.
Ny renivohitra dia Copenhague, vohitra fanjonoana Viking tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tany am-boalohany dia ho hitantsika inona no azontsika atao eto amin'ity tanàna ity kely, maro loko ary mahafinaritra ny avaratr'i Eropa.
2 Inona no ho hita any Copenhagen afaka 3 andro
Eo amoron'ny nosy Zealand izy ary misy ny ampahany amin'ny nosy Amager. Jereo ny Strait of Oresund, amin'ny lafiny iray hafa dia Suède sy ny tanànan'ny Malmo. Manana tanàna manodidina any avaratra, saranga ambony, morontsiraka avaratra andrefana misy azy na kely noho ny saranga antonony sy ny hafa izay indostrialy kokoa na misy olona ambany fidiram-bola.
Manisa ny isan'ireo tanàna, no isaina fa ny renivohitr'i Danemark dia mponina manodidina Mponina 1.800.000. Betsaka ny olona no monina eto, 33% mahery ny totalin'ny mponina ao amin'ny firenena.
Inona no ho hita any Copenhagen afaka 3 andro
Afaka manomboka amin'ny rivotra madio vaovao isika. Noho izany, mandritra ny andro voalohany dia ampirisihiko hitsidika ny Tivoli Gardens, zaridaina fialamboly iray izay manintona ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra. Mandeha minitra vitsy miala eo amin'ny Town Hall sy ny Central Station izy io. Nisokatra ny tranokala 1843 ary toa nitsidika azy imbetsaka i Hans Christian Andersen.
Ny Tivoli Gardens dia manana maritrano mahafinaritra, tranobe manan-tantara ary zaridaina maniry. Ireo zava-manintona dia mifanentana amin'ity hatsarana manan-tantara ity fa misy kosa ny zava-baovao sy maoderina toy ny mahafinaritra roller coaster, vertigo, izay mamily anao amin'ny 100 kilometatra isan'ora, ohatra, na The Demon, coaster roller misy zavakanto nomerika namboarina ary nofinofy ny angano sinoa miaraka amin'ny dragona. Na izany aza, misy ihany koa ilay taloha, ny iray nanomboka tamin'ny 1914, izay iray amin'ireo fitoeram-pasika fito fotsiny izay manana frein isaky ny fiara ...
Eto dia afaka mifalifaly ianao. Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny zaridaina dia misy zoro maro ho an'ny piknik sy fivarotana izay ahafahanao mihinana sakafo aziatika na danoana na frantsay. Misy trano fisakafoanana mihinana aza miaraka amina chef eken'ny Michelin. Ary tsy misy tsy fahampian'ny hotely, mozika mivantana amin'ny fahavaratra sy hetsika maro amin'ny vanim-potoana amin'ny taona. Ny fidirana amin'ny zaridaina Tivoli dia mitentina 110 DKK isaky ny olon-dehibe.
Afaka manohy amin'ny sary miaraka amin'ny Ilay zazavavindrano kely. Mendrika ihany koa izany. Io no iray amin'ireo manintona malaza indrindra eto an-tanàna ary tamin'ny 2013 nahavita ny voalohany zato taona. Ny sarivongana dia fanomezana avy amin'ny mpanao indostrian'ny mpamokatra labiera Carl Jacobsen ho an'ny tanàna, asa nataon'i Edvard Eriksen, vita amin'ny alimo sy granita izy ary mazava ho azy fa aingam-panahy avy amin'ny tantara Andersen. Voalaza fa isaky ny fiposahan'ny masoandro dia mivoaka avy amin'ny rano, mipetraka eo ambonin'ny vatolampy ary manantena ny hahita ny malalany.
Amin'ny tolakandron'ity andro voalohany ity dia afaka mieritreritra momba ny fiantsenana sy ny sakafo isika: arak'izany, raha ampiana ny fihetsiky ny tanàna dia tsy maintsy mamakivaky isika Stroget, faritra fivarotana lehibe indrindra any Copenhagen. Làlana mpandeha an-tongotra miaraka amina magazay lafo vidy nefa koa takatry ny vola. Ohatra, misy Prada, Max Mara, Hermès ary Boss, fa koa H&M na Zara. Mihazakazaka mandritra ny 1.1 kilometatra izy io ary miainga avy amin'ny tranoben'ny lapan'ny Tanàna mankany Kongens Nytorv.
Raha tsy te hiantsena ianao na tsy anao izany dia mbola afaka mandeha an-tongotra ihany satria rehefa mandeha sy miampita arabe hafa ianao dia hahita zorony mahafinaritra eto an-tanàna. Ilay Fiangonan'ny vadintsika, izay nanambadiana mpanjaka sasany, ny Kianja Gammeltorv, ilay Loharano avy amin'ny vano, ny lakandrano izay tsy tazana ny lapan'ny Christianborg miaraka amin'ny Parlemanta, ny lapan'ny tanàna ary ny Tilikambony na ny Royal Danish Theatre. Sakafo hariva ary hatoriana.
Manomboka amin'ny andro faharoa afaka miala amin'ny fialantsasatra mankany amin'ny tantara isika. Raha tianao ny tantaran'ny mpanjaka dia afaka mitsidika ny Lapan'i Amalienborg, androany niova ho tranombakoka. Eto amin'ny vavahady no misy ny fanovana ny mpiambina, ny Royal Guard na Den Kongelige Livgarde. Ny mpiambina dia mandeha amin'ny tobiny mankamin'ny Rosenborg Castle mamaky ny arabe ao an-tanàna mba hiafara amin'ity lapa ity, isan'andro amin'ny 12 ora antoandro maranitra.
Ny lapan'i Amelianborg dia mazàna amina trano efatra mitovy: ny Lapan'ny Kristiana VII, ny Lapan'i Frederik VIIIny Christian IX ary ny Christian VIII. Io tranobe io no misy ny tranombakoka. Ato amin'ity tranombakoka ity dia azonao atao ny mahita ny efitranon'ny mpanjaka sy mpanjakavavy farany indrindra ary ny fomban-drazany sasany.
Ny tranombakoka dia mandinika zato sy tapany ny tantaran'ny danoà, nanomboka tamin'ny Christian IX sy ny Mpanjakavavy Louise (ny zanany efatra dia mpanjaka na mpanjakavavin'i Eropa), miaraka amin'ireo efitran'izy ireo tsy misy kilema, mandraka androany. Ny fidirana dia 105 DKK.
Amin'ny tolakandro, aorian'ny sakafo antoandro, raha tianao ny karazana manintona hafa na mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao dia afaka mitsidika ny Aquarium nasionalin'i Danemark Den Bla Planet. Ny fahatsapana dia ny hoe voahodidin'ny rano. Ny famolavolana ny trano dia manana ivon-tànana misy sandry dimy ary eo afovoany no misy ny aquarium, mba hahafahanao misafidy ny lalanao manokana hahafantarana ireo biby hafahafa izay tazomin'ilay toerana. Mahatalanjona ny Tankika Oceanika, miaraka amin'ny antsantsa martsa, taratra manta ...
Misy ihany koa ny haran-dranomasina feno trondro maro loko, faritra Amazon misy vorona sy lolo, riandrano goavambe ary piranhas mampidi-doza. Avy amin'ny aquarium dia misy fahitana mahafinaritra an'i Oresund. Mora ny mankany dia mandeha amin'ny metro ianao avy eo Kongens Nytrov ary afaka roa ambin'ny folo minitra dia tonga any amin'ny gara Kastrup ianao. Avy eto ianao dia mandeha kely mankany amin'ny aquarium. Ny vidiny dia 170 DKK isaky ny olon-dehibe.
Aorian'ny fotoana fatoriana dia afaka manidy ny andro miaraka aminy isika National Museum of Danemark. Ity tranonkala ity dia nampiranty ny vanim-potoana manan-tantara maro: ny vanim-potoana vato, ny Vikings, ny Moyen Age, ny Renaissance ary ny Modernity. Ao amin'ny lapan'ny Princess, tranobe taonjato faha-XNUMX, ary ao anatiny dia afaka mitsidika ianao, ankoatry ny fanangonana azy, ny Trano fonenana Klunkehjemmet, Fomba Victoria, izay nitovy tamin'ny 1890. Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao dia toerana tsara satria misy fizarana natokana ho azy ireo, ny Tranombakok'i Kid.
Azonao atao ny mitsidika ity tranombakoka ity amin'ny alàlan'ny fitarihana tena sy amin'ny volana Jolay, Aogositra ary Septambra dia misy fitsangatsanganana an-tsokosoko amin'ny teny anglisy. Manana vola kely sisa ve ianao? Avy eo ianao dia afaka mihinana ao amin'ny trano fisakafoanana SMÖR, miaraka amin'ny kilasika amin'ny gastronomika Danoa. Ny fidirana dia 95 DKK.
Ny marainan'ny andro fahatelo, aorian'ny sakafo maraina any amin'ny trano fisakafoanana akaiky, afaka mandeha any amin'ny Tilikambo Boribory, tilikambo namboarina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Miasa toy ny a mpandinika ary izy no zokiny indrindra any Eropa. Izy io dia natsangana araka ny baikon'ny Christian IV ary mbola ampiasaina ary manana mpitsidika marobe. Manana a sehatra ivelany miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra ny ampahany taloha any Copenhagen. Tonga ianao rehefa avy nianika tohatra boribory 268 metatra sy sasany ny halavany, fa ny fon'ny tilikambo dia 85,5 metatra avy any ivelany ka hiakatra 36 metatra dia mandeha 209 ianao ...
Ny ao anatiny dia tranomboky iray amin'ny oniversite, notsidihin'ilay mpanoratra malaza Andersen, ary fisarihana vaovao misy ny a gorodona fitaratra 25 metatra ny haavony. Ny fidirana dia DKK 25 isaky ny olon-dehibe.
Ary farany, araka ny fanirinao, dia afaka mitsidika ny National Gallery of Danemark na SMK, ny Rosenborg Castle miaraka amina taonjato efatra mamirapiratra, ny Tranombakok'i Frilandsmuseet Open Air, iray amin'ireo tranainy indrindra eto an-tany, ny Botanical Garden, Zoo, Planetarium na King's Garden. Tadidio fa raha mividy ilay ianao Karatra fizahantany any Copenhagen maro amin'ireo manintona ireo no maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Copenhague » Inona no ho hita any Copenhagen
Inona no ho hita ao Tortosa